Shanduko uye Inodzosera Policy
Zvinhu zvinofanirwa kudzoserwa mumamiriro azvo epakutanga uye kuputirwa, mukati memazuva gumi nemana kubva pazuva rawakagamuchira. Tinogona kupa kuchinjana kana kuzere kudzorera pamutengo iwe wawakabhadhara.
Iyi yekudzorera mutemo haina kukanganisa kodzero dzako dzepamutemo.
Ndokumbira utarise: Iyi inodzoka uye yekuchinjana mutemo inongoenderana nekutenga kweinternet uye haishande pakutenga kwakaitwa muchitoro.
Isu tinokurudzira kuti iwe udzore zvinhu kuburikidza neinishuwarenzi uye inoteedzana nzira, senge Royal Mail Rekodhi dhirivhari. Ndokumbirawo muyeuke kuti muwane humbowo hwechitambi. Ndokumbira utarise kuti isu hatigone kuve nemhosva yezvinhu chero zvipi zvinoshayikwa muposvo uye zvikasasvika kwatiri. Kana iwe ukashandisa Royal Mail Rekodhi kana Special Dhirivhari iwe unogona kutarisa kana isu tagamuchira yako pasuru uchishandisa iyo Royal Mail webhusaiti track uye trace.
Kutigonesa kugadzirisa kudzoka kwako zvakanyanya, ndokumbira utumire chinyorwa chekuvhara pamwe nechikamu. Pease tsanangura kana iwe uchida kuchinjana kana kudzoreredza, chikonzero chekudzoka, uye rangarira kuisa yako odha nhamba uye neyako meseji yekutaurirana kuitira kuti tikwanise kubata kana paine chero nyaya.
Kana isu tagamuchira chigadzirwa chakadzoserwa kwatiri kuti tidzorere uye tigutsikane nemamiriro acho uye chikonzero chekudzoka, isu tichagadzirisa kudzosera kwako kune iyo yakazara mari yakabhadharwa kuchinhu tichishandisa iyo imwechete nzira yekubhadhara uye account yakatanga kushandiswa pakutenga. .
Ndokumbira utarise: kana iwe ukadzosera chinhu chakatsinhaniswa kuti tidzosere mari ipapo tinochengetera kodzero yekuchaja mari yehutongi ye £ 10 kubhadhara edu ekuwedzera epositi mitengo.
+ DZIDZISA MIITI MIBVUNZO
Zvakakosha here kuzadza fomu rinodzoka?
Tinokurudzira zvakasimba kuti muzadze fomu rekudzorera. Ndokumbira utarise kana chinhu chadzoserwa pasina fomu rekudzoka saka tinogona kukutaurisa nefoni kana email kuti uone chikonzero chekudzoka. Kana isu tisinganzwe kudzoka kubva kwauri mukati memazuva makumi matatu tinochengetera kodzero yekudzosera chinhu kwauri kana, kana chinhu chacho chakakodzera, gadzirisa kudzoreredza kubvisa iyo £ 30 yemari yekutonga.
Ndeipi sevhisi yandinofanira kushandisa kudzorera chinhu?
Isu tinokurudzira kuti udzore zvinhu kuburikidza neinishuwarenzi uye inoteedzana nzira, senge Royal Mail Rekodhi kana Special Dhirivhari. Ndokumbirawo muyeuke kuti muwane humbowo hwechitambi. Ndokumbira utarise kuti isu hatigone kuve nemhosva yezvinhu chero zvipi zvinoshayikwa muposvo uye zvikasasvika kwatiri. Kana iwe ukashandisa Royal Mail Rakarekodhwa kana Special Dhirivhari unogona kutarisa kana isu tagamuchira pasuru yako uchishandisa iyo Royal Mail webhusaiti track uye trace.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti mari yangu yekudzoserwa igadziriswe?
Ndokumbirawo mubvumire anosvika gumi nemashanu mazuva ekushanda mushure mekutambirwa kwekuti dzosera dzese nekutsinhana zvigadziriswe. Kana usati wagamuchira yako yekudzoserwa mukati memazuva gumi nemashanu ekushanda isu tagamuchira chigadzirwa chako, ndapota taura nesu nekutumira tsamba paemail sales@sarmsstore.co.uk.
Inguva yakareba sei mushure mekutenga kwangu ndinogona kudzorera chinhu?
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti munodzosera chinhu chenyu (s) mukati memazuva makumi matatu ekutenga kwenyu.
Kana zvinhu zvadzorerwa mushure menguva ino isu tiri mukati mekodzero dzedu dzekuramba kudzoserwa asi tingave tichida kupa chinjana, zvinoenderana nechinhu chiri muchimiro chakachena. Zvinhu zvinofanirwa kudzoserwa mune imwechete mamiriro zvayakatumirwa kunze.
Ko kana chigadzirwa changu chakakuvara kana chakaipa?
Muchiitiko chisingaite iwe unogamuchira chigadzirwa chakakuvara kana kwete icho chawakaraira ipapo unogona kuchidzorera kwatiri pasina muripo wekutsinhana kana kudzoreredzwa zvizere mukati memazuva makumi matatu ekuchigamuchira.
Ko kana ini ndichida kudzosa chinhu chakatengwa kuburikidza nenzvimbo inodzoserwa mari?
Zvinhu zvakatengwa kuburikidza nemawebhusaiti anodzosera mari zvinogona kudzoserwa mukati menguva imwe chete yemazuva makumi matatu, asi mari yekudzorera haizobhadharwe pane aya maodhi.
Ko kana ndikatambira chipo chepachena nekutenga kwangu?
Kana iwe uchida kudzorera chinhu chakauya nechipo chemahara, unofanira kudzosa chako chemahara chipo nechinhu icho.
+ MUTSVENE POLICY MIBVUNZO
Tichafara kuchinjana chinhu chako sekureba sekunge chadzoserwa mushe mushe uye chinogutsa nzira yekudzorera chinhu sezvakatsanangurwa muMutemo Wedu Wekudzora pamusoro.
Maitiro ekuchinjana chinhu
Tevera maitiro akafanana anotsanangurwa mumitemo yedu yekudzorera. Ndokumbirawo zadza fomu rekudzoka uye utiudze kuti ndechipi chinhu chaungade kuchinjanisa icho pamwe neakakodzera ruzivo rwekuonana, kana tikada kutaura newe.
Chii chinoitika kana paine mutsauko mumutengo?
Kana paine chero imwe muripo yekubhadhara, tinobata iwe kuitira kuti muripo ugokwanisa kuitwa
Kana paine kudzoreredzwa kusiri kukodzera ipapo izvi zvinodzoserwa kukadhi rawakashandisa pakutenga kwekutanga uchipa odzo inodzoserwa kwatiri mukati memazuva makumi matatu.
Iko kune mari yekutungamira?
Kana iwe uri kuchinjana nechinhu chemutengo wakaderera saka tinochengetera kodzero yekuwedzera £ 10 manejimendi yekubhadhara pamutengo wechinhu chinotsiva. Kana zvirizvo, tichabatana newe kukuzivisa nezve izvi.